जन्मभूमि टेक्न नपाउँदा बगेको आँसु – RajdhaniDaily.com – Online Nepali News Portal
RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home बिचार जन्मभूमि टेक्न नपाउँदा बगेको आँसु
सरकारले जनताको अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा भात न पानी भएर निराशाले पुर्पुरोमा हात राख्दै देश र घर सम्झेर तड्पनुपरेका नेपालीको दुर्दशालाई सरकारले खेलाँची ठान्नुहुँदैन । तिनले एक घण्टा होइन, एक दिन होइन तीन–तीन दिनसम्म देशको सीमामा प्रतीक्षा गरेर बस्नुप¥यो । सुत्केरीको बल्लतल्ल उद्धार गरिएको दर्दनाक दृश्यलाई सरकारले अन्य नेपालीलाई पनि देशभित्रै सुरक्षित राख्नुपर्छ । अनेकौं हन्डर बेहोरेर, घन्टौं हिँडेर, तिरस्कृत भएर बल्लबल्ल देशको सीमामा आइपुगेका नेपालीले आफ्नै मातृभूमिमा रहन चाहेका हुन् । मरे पनि आफ्नै माटोमा, आफ्नो भूमिमा मर्न पाउनुपर्छ भन्ने नागरिकको वेदनालाई कसरी अभिभावकले उपेक्षा गर्न सक्छ । भारतमा सामान्य नेपालीले कति अपहेलित हुनुपर्छ भन्ने कुरा महलमा बस्ने र नेतलाई अलिकति पनि बोध हुँदैन किनकि उनीहरू जाँदा त सम्मान हुन्छ ।
कोरोनाको विश्वव्यापी भयसँगै सरकार, सुरक्षाकर्मी अनि स्वास्थ्यकर्मीद्वारा भएका वर्तमानका राम्रा कामका साथै अमानवीय घटनाले पनि पिरोलिरहेको छ । सम्पन्नका घरमा यसो गाँसको जोहो गर्ने समस्या नहोला । सरकारले गरिब, मजदुर किसानलाई राहत दिने योजना बनाइरहँदा परदेशमा, छिमेकी भारतमा पनि भोकभोकै बस्न विवश नेपालीका बारेमा सोच्नुपर्ने अर्को आवश्यकता हो । त्यहाँका मालिकले काम नगरेको समयमा तलब नदिने समस्या अत्यन्तै दयनीय हुन्छ । आखिर रोगले मरिने हो कि भन्दै गर्दा शोक र भोकले मर्नुपर्ने अवस्था त हुनुहुन्न नि । गरिब, निम्न आय भएका, यसो दुईचार पैसा भए पनि कमाएर घरको गर्जो टार्ने उद्देश्यले त घर छोड्नेका दशा कति हृदयविदारक हुन्छन् । कामबाट बिदा नै नपाउने अवस्थाका घरबाहिर बसेकालाई यो समयमा घरपरिवारमा आनन्दले रहने कत्रो चाहना हुँदो हो । यो एउटा गम्भीर मनोवैज्ञानिक विषय हो ।
हो, नेपाल–भारत सरकारले पनि मानवहित सोचेरै आआफ्ना सीमामा अलपत्र भएकालाई सुरक्षित राख्ने भन्ने निर्णय भएको हो तर भावनात्मक रूपमा अप्ठेरोमा मनोवैज्ञानिक विषय अभैm संवेदनशील हुन्छ । भारतमा मजदुरी गर्न गएका अनि अरू उपाय नदेखेर लामो पैदल यात्रा गर्दै, महाकालीको चिसो पानीमा महाजोखिम मोलेर नेपाल आएका समाचार नै कति हृदयविदारक लाग्छन् । सञ्चार माध्यममा आएका बैतडीका लोकेन्द्र बोहराको पीडा, अमरसिंह धामीजस्ता गरिब मजदुरका यथार्थ कथाले मन कटक्क बनाउँछ । तिनीहरू भारतमा मोजमस्ती गर्न, रमरस गर्न गएका होइन थिए । तब त गरिबको सास र लासमा भ्रष्टाचार गर्न तम्सिएका नवसामन्तवादी सोचको सिकार हुँदा आज कैयौं नागरिक नियमको नाउँमा अभैm बढी त्रसित छन् । संवेदनहीनताको पराकाष्ठामा पीडित छन् ।
अझ भारतीय प्रहरीले गर्ने गरेका अत्याचारको सहन कति दयनीय हुन्छ, त्यो कुरा भोग्नेले थाहा पाउँछ तर उल्टै आफ्नै देशमा पनि अत्याचारपूर्ण अनि निर्मम व्यवहार देखाइनुले वास्तवमा मातृभूमि सेवकसँग कसरी सद्भाव राख्ने भन्ने पीडा हुँदैन र ! त्यत्रो क्षेत्र चिसो नदीमा पौडेर, बाँचेर नांगो मान्छे आफ्नो देशको भूमिमा आइपुग्यो अनि उल्टो यातना दिइन्छ भने त्यो व्यवहारलाई सुरक्षा गरिनेको कर्म हो भन्न मिल्छ ? संवेदना र घटनालाई विश्लेषण गर्न नजान्ने नेपालको शैली माथिदेखि तलैसम्म दयनीय र तुच्छ लाग्छ । किनकि, यत्रो विपद्मा संवेदनाको मौका छोपेर भ्रष्टाचार गर्ने सोच जाग्नु निन्दनीय नालायकी बुद्धि हो । मान्छेलाई बाँच्नुको समस्या भइरहँदा कसैलाई कुम्ल्याउने ध्याउन्न कसरी जागृत हुन्छ ?
मरे पनि आफ्नै माटोमा मर्न पाउनुपर्छ भन्ने नागरिकको संवेदनालाई अभिभावकले उपेक्षा गर्न मिल्दैन
केही अबुझ, अटेरले जानीजानी यो संकटको अवस्थामा सुरक्षित रहनका लागि भनेर बनाइएको नियमलाई मानेनन् होला । बिचरा † धेरै त बाध्य भएर विकल्प खोज्दा प्रहरीको फन्दा परे हुनन् । प्रहरीलाई पनि हैरान छ तर कतिपयलाई त प्रहरीले अत्यन्तै पाशविक व्यवहार पनि गरेका भिडियो आएका छन् । एउटा मूर्ख भयो र मानेन भनेर अर्को पनि मूर्ख र पाशविक आचरणमा परिणत हुनु जायज होइन । यसो भन्दा असल प्रहरीले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेक्रममा आफ्नो जीवनलाई दाउमा राखेर सेवा गरिरहेका छन् । त्यो विषय अत्यन्तै सराहनीय, र मननीय पक्ष हो । सरकारले यो अप्ठ्यारोमा सक्रिय व्यक्तिका लागि प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
सरकारसँग भारतबाट फर्केका नेपालीले देशमा आउन देऊ भनिएको विषय सरकारको विरोध वा समर्थनको होइन, न्याय र समयोचित एक नागरिकको हो । नेपाल सरकारले लागू गरेको नियम र भारत सरकारको नियमका बीचको तालमेल नभएकाले न ती जनता सीमा क्षेत्रसम्म आइपुगेका हुन् । त्यसमा पनि यो ‘एकान्तवास’ पहिलो बाध्यात्मक अभ्यास हो, जनता पनि जानकार छैनौं । आइहालेका छन् भनेपछि यतिधेरै कठोर बनेर सरकारले ढुंगाले लेखेको अक्षरको नियम बनाउने बेला पनि त होइन होला नि !
हो, सरकारले नाकाहरू त बन्द गरेकै थियो तर भारतमा रहँदा त्यहाँका मजदुरलाई आफ्नो कमाइले खानै नपुग्ने अवस्था पनि त छ । ती जनतालाई हामीले जसरी मानवीय व्यवहार गर्दैनन् । काम नगरेको समयमा तलब दिँदैनन् । धेरै तल्लो स्तरको काम गर्न विवश नेपालीको दुर्दशालाई सरकारले निकटबाट चियाउनेसम्मको दया पनि देखाएको छैन । आखिर क्वारेन्टाइन (पूर्वसतर्क उपचारात्मक अवस्था)मा राख्नेगरी सबै नेपालीलाई नेपालमै ल्याइँदा के बिग्रिन्थ्यो ? गर्भवती महिलालाई तीन दिनपछि बल्ल उद्धार गरियो । विश्वका अस्ट्रेलियालगायतका सरकारले आफ्ना नागरिकलाई हवाई चार्टर गरेर लैजाने निर्णय गर्छ अनि हाम्रो देश भारतीय सीमामा चरम तिरस्कार र पीडाबोध गर्दै बस्नुपर्दाको त्यो संवेदना कति दर्दनाक हुन्छ । अझ माथिको आदेश भन्दै कुराइन्छ ।
पछिल्लो समयमा नेपाल र भारतबीच सहमति गरी नेपालमा भएका १ सय २५ जना मजदुर भारतीय नागरिकलाई भैरहवास्थित क्वारेन्टाइनमा राखियो भने नेपाल–भारत सीमानाका सुनौली क्षेत्रमा रहेका ३ सय नेपालीलाई भारतको नौतनवास्थित क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । गत १७ चैत्रबाट तीन दिनसम्म बिचल्ली भएर बसेकालाई बल्ल नेपाल–भारतले सहमति गरेका छन् । आखिर ती नेपाली मनमा एकातिर आफ्नो भूमिमा फर्कन नपाएको पीडा छ भने अर्कोतिर कोरोनाको बढ्दो महामारीको त्रास छ । भारतमा नेपालीलाई भेडाबाख्रा राखे जसरी राखिएको कुरालाई सरकारले कसरी हेरेको छ ? कमसेकम आफ्नो देशमा आउन पाएको भए एउटै कोरोनारूपी साझा त्रास मात्र बाँकी रहन्थ्यो तर त्यसो गरिएन । बरु त भारतका नागरिकलाई भारतकै भूमिको क्वारेन्टाइनमा र नेपालकालाई नेपालकै क्वारेन्टाइनमा राखिएको भए चित्त बुझ्ने अवस्था हुने थियो ।
नेपालमा अरू समयमा गरिब, सर्वसाधारण केही नभनी घरखेत सारा उडाउने गरी चर्को रकम असुलेर उपचार गर्न बजार थापेका निजी अस्पतालहरू कोरोनाको परीक्षण नगर्ने भन्दै निर्लज्ज रूपमा तर्किएका समाचार आइरहेकै छन् । सबै खराब मात्र त हुँदैनन् तर अधिकांश अस्पतालमा बिरामी भएर जाँदा अर्को मानसिक बिरामी बोक्न हामी नेपाली विवश छौं । तिनका अमानवीय व्यवहारलाई पैसाले किनेर पैसा असुल्ने हुँदा पर्दा पछाडि मात्र राखिन्छ । कपडा पसलमा सामानको भाउ घटाउने गरिन्छ, गाडीमा गाडी भाडामा छुट हुन्छ, सब्जी किन्दा पनि हामी अलिकति घटाइ माग्छौं तर अस्पताल नै यस्तो क्षेत्र हो जहाँ एक पैसा कम तिर्न मिल्दैन, जहाँ जति भन्यो त्यति नै रकम जसरी भए पनि तिर्नै पर्छ । बिरामीवालालाई औषधि, उपचारका बारेमा केही ज्ञान नहुँदा जे भने पनि, जसो भने पनि, जति मागे पनि तिर्नै पर्ने हाम्रो बाध्यता छ । त्यसैले जीवनभरि कमाएर पैसा खर्च गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो र अप्ठ्यारो स्थान भनेकै अस्पताल हो । अझ अस्पतालमा बिरामीको बेड खाली भयो भने बिरामीले अस्पताल बस्ने दिन लम्ब्याएरसमेत राखिदिएका हुने रहेछन् । हामीलाई विश्वास गर्नु बाहेक अरू विकल्प हुँदैन किनकि त्यहाँ जीवनको सवाल जोडिएको हुन्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा विदेशबाट आएकालाई तिरस्कार गर्ने गरेका गलत सोचले पनि तिनको संवेदनामा प्रहार भएको देखिन्छ
अर्को पक्ष, सरकारी अस्पतालमा त त्यसै पनि लापर्बाही गर्ने र बिरामीलाई बेवास्ता गर्ने, सफासुग्घर नगर्नेलगायतका असंवेदनाको व्यवहार भइरहेकै हुन् । सरकारी अस्पतालमा सबैभन्दा गाह्रो कुरा त डाक्टरको बोली सुन्न पाउनु नै हो । तिनले निजीमा धेरै पैसा पाइने भएर पनि बिरामीलाई वास्ता नगरेको कुरा नयाँ होइन ।
हाल आएर कोरोना विषाणुको कारणले डाक्टरहरूले अन्य रोगका लागेकालाई पनि बेवास्ता गर्ने गरेका हृदयविदारक घटना आइरहेका छन् । हो, खतरा छ तर पेसाप्रति निष्ठावान् भएर सतर्कतालाई अपनाउँदै सेवा गर्नु डाक्टरको कर्तव्य पनि त हो । ड्राइभरको पेसामा त हरेक दिन, हरेक क्षण जोखिम हुन्छ तर यत्तिका धेरैले गाडी चलाइरहेका छन् । यो अवस्था परीक्षाको घडी हो ।
२० चैत्रसम्म नेपालमा जम्मा ६ जना संक्रमित भएको पुष्टि भएको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ । हामी जोखिमबाट बाहिर छैनौं । अर्को पक्ष डाक्टरले सामान्य मौसमी ज्वरो, रुघाखोकी लागेकालाई समेत नहेर्ने, बिरामीलाई कोठामा राखेपछि चेकजाँच नगर्ने, छिःछिः र दुरदुर गर्ने गरेका कुरा साँच्चै दयनीय लाग्छन् । एउटा रोग लागेको बिरामी उचित उपचार नपाएर झनै ग्रसित हुनुपर्ने, डाक्टरले नै बेवास्ता गर्ने गर्दा तिनको अवस्था कस्तो होला ? अर्को कुरा ग्रामीण क्षेत्रमा विदेशबाट आएकालाई तिरस्कार गर्ने गरेका गलत सोचले पनि तिनको संवेदनामा प्रहार भएको देखिन्छ । सीमापारि रहँदासमेत सरकार छ भन्ने भएमा मनोवैज्ञानिक रूपमा एउटा उपचार हुन्छ । यसर्थ, अप्ठ्यारोलाई बुझेर न्यायोचित सम्बोधन गर्नु सबैको आवश्यकता हो । सचेत रहनु हरेक नागरिकको दायित्व हो । सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने यो एउटा अवसर पनि हो ।
Previous article फोर्ब्सको सूचीमा परेकी गल्फ खेलाडी भन्छिन्, ‘कोरोनाले खुशी साट्नै पाइन’
Next article क्युङ गाउँमा सकियो खाद्यान्न, पाँच परिवार भोकै